Saraakiil katirsan Ciidamada Dowladda oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday Weeraro Muqdisho ka dhacay. – Shabakadda Amiirnuur
September 9, 2019 4:38 pm by admin Views: 89
Wararka laga helayo Dharkeynleey ayaa sheegaya in rag hubeysan ay toogasho ku dileen Sarkaal magaciisa lagusoo gaabiyay Xasan Guuleed, Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarkan salkaalka lagu dilay.
Dhinaca kale warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax maanta barqadii ka dhacay magaalada Muqdisho kaas oo lala beegsaday sarkaal sare oo katirsanaa ciidamada Booliska dowladda Federaalka.
Qaraxa oo ka dhax qarxay gaari ku sugnaa degmada Xamar Jajab ayaa sababay dhaawaca sarkaal sare oo boolis ah iyo askari ilaala u ahaa.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in qaraxa uu si dirqi ah uga badbaaday Jeneraal Maxamed Cabdulle Dhoorre oo kamid ah saraakiisha sarsare ee Booliska waxaa sidoo kale dhaawac halis ah uu gaaray askari ilaala u ahaa.
Markii uu qaraxu dhacay kadib waxaa goobta soo gaaray ciidamo isugu jira boolis iyo Nabad sugid kuwaas oo qaaday dhaawaca Jeneraalka iyo askarigii la socday, illaa iyo hadda majirto cid sheegatay mas’uuliyadda qaraxan khasaaraha dhaliyay.